August 18, 2019 - ThutaSone
August 18, 2019 ThutaSone 0
နေရစ်ခဲ့ပါတော့ မဟေသီရယ်…… တောင်တွေရစ်ဝိုင်း မှိုင်းညို ့ဆိုင်းလို့ နေထွက်/နေဝင် မမြင်မသိတဲ့လျှူ ိမြောင်ချ ိုင့်ဝှမ်း တဖက်ကမ်းမှာ နိဂုံးတဘဝ ဒီလိုချ ုပ်ရမယ်ဆိုတာ အစက ဘယ်သိပါ့မလဲကွယ်……. ပေးတဲ့တာဝန် ငါကျေပွန်အောင်မကြောက်ရဲစွမ်း စစ်မှု့ထမ်းလျှက်မင်းကိုမလွမ်းလို့ မဟုတ်ခဲ့ရပါဘူး…… သားနဲ့သမီး ပညာပြီးအောင်တာဝန်ရှောင်တာလဲ မဟုတ်ခဲ့ရပါဘူးမဟေသီရယ်……. ဒီနေ့…ဘဝရဲ့အဆုံးအဖြတ်နေ့…… သာလွန်အင်အား လွန်များပြားတဲ့ရန်သူသစ္စာဖောက် […]
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်မှာ တိုက်ပွဲ သုံးနေရာလောက်ထိ ဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲကြား မသွားသင့်သေးဘူးလို့ TNLA ဆို
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်မှာ တိုက်ပွဲ သုံးနေရာလောက်ထိ ဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲကြား မသွားသင့်သေးဘူးလို့ TNLA ဆို သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်မှာ တိုက်ပွဲ သုံးနေရာလောက် ဖြစ်တယ်လို့ TNLA ဆို မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်က တပ်မတော် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် အပါအဝင် […]
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲဖျက်စီးခံထားရသော ဂုတ်တွင်းတံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားရင်တောင်မှ ခရီးဆက်လို့မရနိုင်သေး
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲဖျက်စီးခံထားရသော ဂုတ်တွင်းတံတားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားရင်တောင်မှ ခရီးဆက်လို့မရနိုင်သေး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ မန္တလေး-မူဆယ် လမ်းမကြီး ကွတ်ခိုင်မြို့မရောက်ခင် တံတား(၂)စင်းလည်းဖျက်ဆီးခံထားတာကြောင့် ဂုတ်တွင်းတံတားပြီးစီးသွားရင်တောင်မှ နောင်ချို၊လားရှိုး၊မူဆယ်ဘက်ကို ခရီးဆက်နိုင်မှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ မွန်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ ဦးသူရထွန်းအောင်က ပြောပါတယ်။ သြဂုတ်လ( ၁၅)ရက်နေ့က နောင်ချိုနဲ့ နောင်ပိန်းကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအတွင်း မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတဲ့ […]
မိသားစု နဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ရပါတယ်ဗိုလ်မှူး ပြည့်ဖြိုးအောင် နမ့်ဖတ်ကာ တွင် ကျဆုံး လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်..
မိသားစု နဲ့ထပ်တူ ဝမ်းနည်း ရပါတယ်ဗိုလ်မှူး ပြည့်ဖြိုးအောင် နမ့်ဖတ်ကာ တွင် ကျဆုံး လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်.. သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တပ်မတော်ဘက်က တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ပေးဖို့ မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အခုလို တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာပါ။ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၃ […]
သီပေါက အခမဲ့့ ကျွေးနေတဲ့့ ကုုန်းသာရွာ ၉ မိုင်လမ်းခွဲထမင်းဆိုင််
သီပေါက အခမဲ့့ ကျွေးနေတဲ့့ ကုုန်းသာရွာ ၉ မိုင်လမ်းခွဲထမင်းဆိုင်် ကားဆရာများအတွွက်စေတနာဖြင့်် အခမဲ့ချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးနေတဲ့တောင်တန်းပြာစားသောက်ဆိုင် ကားဆရာများကျနော်် တောင်တန်းပြာစားသောက်ဆိုင််တွင် စိတ်ချမ်းသာစွာရပ်နားကြပါ စားသောက်ရေးတွွက်လည်း မပူပင်ပါနဲ့ တောင်တန်းပြာမိသားစုကစေတနာဖြင့် အခမဲ့ချက်ပြုတ်ကြွေးမွေးနေပါတယ်် သိိတဲ့ကားဆရာ မသိတဲ့ကားဆရာမခွဲခြားပါဘူး ကုုန်းသာရွာ ၉ မိုင်လမ်းခွဲ သီပေါ။ crd
ကွတ်ခိုင်မှဒီနေ့မနက် ငါးရှဉ့်တွေ အခမဲ့ လိုက်ဝေနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ဒီနေ့မနက် ကွတ်ခိုင်မှာ ငါးရှဉ့်တွေ အခမဲ့ လိုက်ဝေနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်း တည်ငြိမ်စပြုနေတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို လှုပ်ခတ်သွားစေတာကတော့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့လို့ ခေါ်တဲ့ လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အပစ်မဲ့ပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း၁၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတင်မကေသေးပဲ ဂုတ်တွင်းတံတားအပါအဝင် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက တံတား […]
သံဃာတော်အပါး(၃၀၀၀) ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲကြီးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
သံဃာတော်အပါး(၃၀၀၀) ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲကြီးကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ခေတ်ရှေ့ပြေးဖက်ရှင်များသာမက မြန်မာဆန်ဆန်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့လည်း အမြဲတမ်းလိုက်ဖက်မှုရှိတာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့အားပေးမှုများစွာကို ရရှိထားသူကတော့ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ဝေဖန်မှုမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ကြံ့ကြံ့ခိုင်ကာ ဝါသနာပါတဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ဆောင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမလုပ်သမျှအနုပညယအလုပ်တွေကို အားပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာဟာ ဘာသာရေးလည်း ကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး […]
သတိဝီရိယဖြင့်ပြည်သူမျာ နေထိုင်သွားလာကြရန် RCSS အဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်
ပြည်သူများ သတိဝီရိယဖြင့် နေထိုင်သွားလာကြရန် RCSS အဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ဘယ်လောက်ကြာမယ် မခန့်မှန်းနိုင်တာကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ သတိဝီရိယနဲ့ နေထိုင်သွားလာကြဖို့ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာ မူဆယ်-မန္တလေးလမ်းပေါ်က တံတားတချို့ ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခံထားရတာကြောင့် […]
ရေဘေးအလှူမှာ (၂၅)သိန်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဘိုကလေးတင့်အောင်
ရေဘေးအလှူမှာ (၂၅)သိန်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဘိုကလေးတင့်အောင် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း မွန်ပြည်နယ် ရေကြီးမြေပြိုမှုအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူလူထုက မျာစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကူညီလှူဒါန်းနေကြသလို အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှလည်း တတ်နိုင်သမျှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက သိန်း(၁၀၀) […]
အ​မေမငိုပါနဲ့ပြည်​သူမုန်​းတဲ့ သားတို့ဘဝ အသက်​​တွေ​ပေး သက်​​သေပြသွားတာလို့ ဂုဏ်ယူဝင်​့ကြွားစွာပြုံးလိုက်စမ်းပါ
အ​မေမငိုပါနဲ့ပြည်​သူမုန်​းတဲ့ သားတို့ဘဝ အသက်​​တွေ​ပေး သက်​​သေပြသွားတာလို့ ဂုဏ်ယူဝင်​့ကြွားစွာပြုံးလိုက်စမ်းပါ မငိုပါနဲ့အ​မေပြုံးပြလိုက်​စမ်​းပါပြည်​သူမုန်​းတဲ့သားတို့ဘဝအသက်​​တွေ​ပေးသက်​​သေပြသွားတာလို့ဂုဏ်​ယူဝင်​့စွာကြွားလိုက်​စမ်​းပါ​မေ​မေရယ်​ကျဆုံး​လေပြီး​သောပြည်​သူ့ရဲများဂုဏ်​ယူ​လေးစားလျှက်​ပါ မငိုပါနဲ့အ​မပှေုံးပှလိုကြ​စမြ​းပါပှညြ​သူမုနြ​းတဲ့သားတို့ဘဝအသကြ​​တှေ​ပေးသကြ​​သပှသှေားတာလို့ဂုဏြ​ယူဝငြ​့စှာကှှားလိုကြ​စမြ​းပါ​မေ​မရယြေ​ကဆွုံး​လပှေီး​သောပှညြ​သူ့ရဲမွားဂုဏြ​ယူ​လေးစားလွှကြ​ပါ မငိုပါနဲ့အ​မေပြုံးပြလိုက်​စမ်​းပါပြည်​သူမုန်​းတဲ့သားတို့ဘဝအသက်​​တွေ​ပေးသက်​​သေပြသွားတာလို့ဂုဏ်​ယူဝင်​့စွာကြွားလိုက်​စမ်​းပါ​မေ​မေရယ်​ကျဆုံး​လေပြီး​သောပြည်​သူ့ရဲများဂုဏ်​ယူ​လေးစားလျှက်​ပါ မငိုပါနဲ့အ​မပှေုံးပှလိုကြ​စမြ​းပါပှညြ​သူမုနြ​းတဲ့သားတို့ဘဝအသကြ​​တှေ​ပေးသကြ​​သပှသှေားတာလို့ဂုဏြ​ယူဝငြ​့စှာကှှားလိုကြ​စမြ​းပါ​မေ​မရယြေ​ကဆွုံး​လပှေီး​သောပှညြ​သူ့ရဲမွားဂုဏြ​ယူ​လေးစားလွှကြ​ပါ